Amalunga eWoza Atshengisela eHarare
Mpalakazi 02, 2013
Women of Zimbabwe Arise WOZA
HARARE — Amalunga phose alikhulu enhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise ngoMvulo afole elubhekise e dale lephalamende esiyakwethula incwadi yezikhalazo phezu kodaba lokuhlukuluzwa kwabesifazane elizweni kanye lokukhankasela ukuba luphathise umuntu wonke elizweni uhlelo lwe ZimAsset ikakhulu omama hatshi amalunga e Zanu Pf kuphela. Abe WOZA bathi ukutshengisela kwalamuhla kuphansi kohlelo lokukhankasela ukuqedwa kodlakela oluqondiswe kwabesifazane owe 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.
Yikuhlabela kwamalunga eWOZA lawa ngesikhathi amapholisa ebasusa lapho bekade bemi khona belindele enye yenkokheli yabo, unkosikazi Jenn Williams, ebingene phakathi ukuyanikeza incwadi yezikhalazo kumabhalane wedale lephalamende. U Williams utshele intathelizindaba ukuba inhloso yalokhu kutshengisela kuyikudinga ukuba batholiswe incazelo egcweleyo phezu kohlelo lwe ZimAsset.
Inhlolisiso asebeyenzile njengenhlanganiso ibonisa ukuba balutshwana abaluzwisisayo loluhlelo okukhulunywa ngalo njalo akekho osethe walubona ugwalo lwakhona kuveze u Williams. Uthi incwadi yabo yezikhalazo icine isisemukelwa ngunkosikazi Gladys Pise igqwetha ledale lephalamende ngoba bethi umabhalane wephalamende engathandanga ukuyemukela lincwadi loba ukubabona.
U Williams uthi bathethe lelithuba ukuhle baphatheke kuhlelo lwe 16 Days of Activism Against Gender Based Violence, ngokutshengisela phezu kokuqedwa kodlakela oluqondiswa kuzulu wenhlanganiso njengeyakhe ngamapholisa ngesikhathi zitshengisela phezu kwamalungelo azo.
Omunye wenkokheli enhlanganisweni ye WOZA unkosazana Magodonga Mahlangu uthi okunye okubafuqileyo, yikuba bakhathazekile phezu kokungagcwaliswa kwezithembiso ezenziwa nguhulumende weZanu Pf ngesikhathi engena embusweni.
Izikhalazo zabo zivela kumpumela yenhlolisiso abayenze njengenhlanganiso kumalunga abo phezu kwendaba ezehlukeneyo okubalisa uhlelo lwe ZimAsset kuveze u Mahlangu.
Lanxa engekho oke waxotshwa, ukutshaywa loba ukuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo njengalokho okuvame ukubonakala kweminye imikhosi yokutshengisela, kuke kwaba lokuxokozela ngesikhathi evinjwa amalunga eWOZA la ngoba bethi kumele bahlalele katshana lesango ledale lephalamende.